समाज – AB Sansar
November 19, 2021 Ab - NewsLeaveaComment on कालो कोट लगाउने हातमा ढु’ङ्गो समाउने कानुन व्यवसायीलाई गा’ली गर्ने दुई जना प’क्राउ’
काठमाडौं : प्रधानन्यायधीश चाेलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलनरत नेपाल बार एसाेसिएसन आबद्ध कानुन व्यवसायीलाई ध’म्काउने दुई जना प’क्राउ परेका छन् । बिहिबार बार एसाेसिएसनमा गएर आ’न्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई ध’म्काएको आ’रोपमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले बिहीबार राति दुई जनालाई प’क्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा बौद्धका तीर्थ ढकाल र मुलपानीका सी’ताराम […]
November 17, 2021 Ab - NewsLeaveaComment on दि’वगंत अभिनेता सु’शान्त सिंह राजपूतको परिवारका ६ सदस्यहरुको एकैसाथ मृ’त्यु
काठमाडौं। दि’वंगत बलिउड अभिनेता सु’शान्त सिंह राजपुतका ६ जना आफन्तको एकैपटक मृ’त्यु भएको छ । बिहारको लखीसरायमा भएको सडक दु’र्घटना’मा उनीहरुको मृ’त्यु भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् ।यी सबै एउटा दा’हसंस्का’र कार्यक्रममा सहभागी भएर सुमो गाडीमा जा’मुइ फर्किरहेका थिए । बाटोमा उनीहरुको गाडी ट्र’कसँग ठो’क्कि’एको हो ।दु’र्घटना लखीसराय जिल्लाको सिकंदरा–शेखपुर एनएच–३३३ मा हलसी थाना क्षेत्रको […]
यो सुन्दर झरनामा गएका युवा युवतीलाई प्रहरीले पक्रेर, आखिर किन लैजान्छ?
November 17, 2021 santoshLeaveaComment on यो सुन्दर झरनामा गएका युवा युवतीलाई प्रहरीले पक्रेर, आखिर किन लैजान्छ?
पछिल्लो समय आन्तरीक पर्यटकहरुले नयाँ ठाउँ जाने सेल्फी खिच्ने र टिकटक बनाउने प्रचलन बढेको छ । यसमा लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका १ उदीपुरमा रहेको गाईखुरे झरना पनि पर्छ । त्यहाँ मानिसहरु जाने सेल्फी लिने र टिकटक बनाउने गर्न थालेका छन् । तर त्यहाँ जान र सेल्फी खिच्न टिकटक बनाउन अहिले लमजुङ प्रशासनले रोक लगाएको छ । […]
September 14, 2021 santoshLeaveaComment on झापामा यी प्रहरी नुहाउन गएका थिए, तर फ’र्कियो उनको शव! यस्तो रहेछ कारण”
झापामा एक प्रहरी नुहाउन गएका थिए । तर उनी फर्केर आएनन् । ती प्रहरी जवानको पोखरीमा डु बे र मृत्यु भएको हो । झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित प्रहरी चौकी पिन्डलवारीमा कार्यरत २५ वर्षीय प्रहरी जवान सरोज गिरीको पोखरीमा डु बे र मृत्यु भएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ । उनी नुहाउन गएका थिए […]
पथरी- मोरङको पथरीशनिश्चरे–४ की वर्षा दर्जी (कंसाकार) कु’ टपि’ ट भएको बारेमा समाचार विभिन्न मिडियाहरुमा आएपछि घट्ना भएको पाँच दिनपछि बल्ल आइतबार मुद्दा दर्ता भएको छ । जग्गाको सिमानामा घाँस का’टे को निहँुमा साउन ६ गते साँझ छिमेकी डिल्ली नेपाल र उनको पत्नी हेमा नेपालले ४२ वर्षीय वर्षा दर्जीलाई कु’ टपि’ ट ग’ रे का […]
July 25, 2021 santoshLeaveaComment on परिवारलाइ खुसि दिन प्रदेश गएका आफन्त आए बाकसमा, शव राखेको बाकस देखेपछि भक्कानिए आमा र श्रीमती र छोराछोरी (फोटोफिचर)
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जहाजले मलेशियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याएको छ । निगमको वाइडबडी ए३३० जहाजले मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकैपटक २४ वटा शव र तीन वटा अस्तु नेपाल ल्याएको हो । सबैभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको मलेसिया नेपाली श्रमिकको धेरै मृत्यु हुने मुलुकमा पर्छ । […]
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका स्थित सुनिता लिम्बू आफ्नो श्रीमान वैदेशिक रोजगारका क्रममा बाहिर हुनुहुन्छ र उनका दुई छोराछोरी समेत रहेका छन् तर उनी भर्खरै गाउँकै एकजना नाताले जेठाजु पर्ने डम्बर लिम्बुसँग फरार भएकी छिन्।यस घटनालाई लिएर यस अघि नै सासू ससुरासँग गरिएको कुराकानीलाई समेत राखिसकिएको छ। आफ्नो परीवारको भविष्य सुन्दर बनाउन रातदिन साउदी अरेबियामा रोजगारी गर्दै […]
धनुषा । बालिकाहरुलाई यौन दूव्र्यवहार गरेको आरोपमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका–१० माझी टोलका ७७ बर्षीय थानाप्रसाद भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेक छ । इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले विहीबार बालिकाहरुलाई यौन दूव्र्यवहार गरेको आरोपमा भट्टलाईलाई पक्राउ गरेको हो । उनले गाउँकै ३ जना बालिकालाई एक साथ यौन दूव्र्यवहार गरेकोे स्थानीयले बताएका छन् । यौन दूव्र्यवहारमा परेका बालिकाहरु ७ […]
July 23, 2021 santoshLeaveaComment on बाबुराम भट्टराईकी पुत्री मानुषीले प्रियंकाको सिको गर्दै सर्वजनिक गरिन बेबी बम्पl
काठमाडौ । नायिका प्रियंका कार्कीले आफू गर्भवती भएदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेर गसिप बनिरहेकी छिन् । कार्कीले ताली र गाली दुवै खाइरहेकी छिन् । केही दिन अगाडी पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि प्रियंकालाई सपोर्ट गर्दै ‘पितृसत्ताको जालो च्यात्ने साहस’ भन्दै ट्विट गरे । भट्टराईले उक्त ट्विट मार्फत धेरै नकारात्मक गाली खानुपर्‍यो । […]
July 21, 2021 santoshLeaveaComment on पोखरीमा डुबेर एक जनाको मृत्युl
काठमाडौँ । पोखरीमा डुबेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । सर्लाहीको हरिपुरमा पोखरीमा डुबेर एक युवकको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हरिपुर–४ हरैयाका दीपेन्द्र माझी बुधबार बिहान घरनजिकै रहेको पोखरीमा मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई साँझ अत्यधिक मादक पदार्थ खाएर लरबराईरहेको अवस्थामा पोखरीको डिलमा देखेको स्थानीयले बताएपछि रातभर घर नआएका माझीलाईइ प्रहरीको टोलीले पोखरीमा […]